China MY magnet dọwara mgbapụta emepụta na suppliers | damei kingmech mgbapụta
Udi: DN25 ~ DN300
Ike: ~ 800m3 / h
Isi: ~ 300m
Okpomọkụ: erughị 120 ℃
Nrụgide: 2.5 ~ 10MPa
Ike: ~ 280kW
1.Long aro submerged mgbapụta
2.Maximum mikpuru omimi bụ 7m.
3.Di ize ndụ mmiri mmiri nfuli ga-onwem na abụọ containment shei, Ọ ga-abụ mkpu mgbe mbụ containment shei lekaged.
4.The na-akwọ ụgbọala aro na-akwado site Rolling agba, Rolling agba bụ nke mmanụ mmanu; a na-akwado mgbapụta mgbapụta site na nkedo mmiri nke hydraulic, a na-ete mmanụ na-agba mmiri site na mmiri mmiri mgbapụta nke mgbapụta ahụ.
5.Magnetic mgbapụta nwere ike nweta na-enweghị leakage, ya''s adabara nyefee corrosive, awu, flammable, na-agbawa agbawa, oké ọnụ ma ọ bụ mfe gasification mmiri mmiri. Na mgbakwunye, mgbapụta magnet dịkwa mma maka ibute okpomọkụ dị elu, mmiri dị ala na mmiri mmiri n'okpuru ọnọdụ agụụ.
7.There bụ eji amị na magnetik mgbapụta, n'ihi ya, ọ''s adabara iji rụọ ọrụ mgbe niile. Gbalịa izere oge ikwupụta, anaghị agakarị ugboro 10 n'otu awa. Mgbe ahụ ọ nwere ike belata abrasion ahụ iji na-amị amị n'oge ịmalite na ịkwụsị, ma gbatịa ndụ ọrụ ya.
8.For elu okpomọkụ magnetik mgbapụta, e nwere a gbatịrị akụkụ n'etiti mgbapụta na magnetik njikọ, nke kpụrụ abụọ onwe ha okirikiri.
9.N'oge na-arụ ọrụ, ike axial magnetik na-akpaghị aka na-edozi site na ike hydraulic, na-etinye diski na-ebu ngwa ngwa ngwa ngwa mgbe mgbapụta ahụ malitere ma kwụsị.
Nke gara aga: MZF Magnetic Drive mgbapụta
Osote: MMC Igwe Ọdụdọ Magnet